Mitambo, 01 Ndira 2013
Mbudzi 23, 2012
Kuchatyokwa makumbo neMugovera apo vakomana vezvikwata zveDynamos ne Monomotapa vachange vachitamba mumakwikwi emukombe weMbada Diamonds Cup.
Dynamos Yopa Vatambi Vavo Mari Zvichitevera Kutora Mukombe weCLPSL
Chikwata cheDynamos chinoti chichapa vatambi vacho mari inosvika zvikamu makumi mana kubva muzana zvemari ichabva kukambani ye Delta semubairo wekutora kwayakaita mukombe we Castle Lager Premier Soccer League.
Mbudzi 08, 2012
ZIFA Yoshorwa Zvikuru Mabatiro Ayo Basa
Chimwe chikwata chevechidiki che Under 20 chakatadzawo kuenda kuAngola kunozadzisa mutambo wacho mushure mekunge ZIFA yati yashaya mari zvakare
Vatambi vechikwata cheHighlanders vanonzi vari kuenderera mberi nekuramwa kwavo basa zvichitevera kuramwa kwavakaita kuita mitambo yegadziriro neChitatu vachiti vanoda kutanga vabhadharwa mari dzavo dzemabhonasi dzavakavimbiswa kana vachinge vakunda.
Zifa Inodoma Achatungamira Vatsigiri veNhabvu
Vakasarudzwa kutungamira kumirira vatsigiri nenhabvu neZimbabwe Football Association, Zifa, VaSimiyoni Jamanda, vanoti vari mubishi rekuunganidza vatsigiri venhabvu vachaenda nechikwata chenyika kuAngola.
Zimbabwe Warriors Yogadzirira Mutambo Wayo neAngola neSvondo
Vakomana veZimbabwe Warriors vatanga gadziriro yemutambo mukuru ne Angola uyo uchatambwa neSvondo.
Muimbi wemuZimbabwe ane mukurumbira pasi rose, Oliver Mtukudzi, ari kusvitsa makore makumi matanhatu neChishanu apo ari kuitirwa mabiko munhandare yeGlamis muHarare.
Zimbabwe Yotashurana neSri Lanka neChipiri
Mukuru wevatambi vekiriketi, Brendan Taylor, anoti chikwata chake chichaita mashiripiti nekudambura zvikwata zvinonzi zvinorura mumutambo uyu.
Chikunguru 20, 2012
Vatambi Vemutambo WeRugby WeChidiki Vatatu Vobatwa Vane Mushonga Usingabvumirwe Muropa Ravo